China Imboni Izindaba Factory - eshibhile Imboni Izindaba Supplier, Umthumeli - Ingxenye 2
Umlilo US Hoverboard eyabangela ukuba omunye ukufa nokulimala ezimbili
isikhathi Iposi: 03-15-2017
Ngokusho US Abezindaba babika Mashi 11, 2017, eHarrisburg idolobha sigameko ukuqhuma hoverboard umlilo zaholela ekufeni kwezingane, amantombazane ababili balimala, ngaphezu izicishamlilo balimala. Ngokusho izicishamlilo kuchaziwe, at 8 ntambama, ukuze babalekele, omunye izisulu ...Funda kabanzi »
Electric Hoverboard kwenza ukuphila abayitoho ngaphezulu & khulula
isikhathi Iposi: 03-07-2017
Namuhla, ezemidlalo isibe imisebenzi ozithandayo ehhovisi gen, abasebenzi ezimhlophe-collar ehhovisi, ngosuku yama-computer, ngamunye izingxenye zomzimba ziyinkimbinkimbi ngendlela ukungawuvivinyi umzimba, ezithandwa ikakhulukazi izinkinga ezihlukahlukene ezincane ezicini ezihlukahlukene emzimbeni, ezifana intamo obukhulu, igundane uhlangothi, amehlo omile, ther ...Funda kabanzi »
I Ubuhlobo Phakathi UL 2272 Certification & Hoverboard
isikhathi Iposi: 02-07-2017
Hoverboard futhi ngokuthi Scooters self-kahle, ngenxa sigameko eminyaka eyedlule hoverboard umlilo, US Consumer Product Safety Association (CPSC) usememezele ukuthi zonke isikuta self-kulinganisa noma Hoverboard abakhiqizi, abangenisa nabasabalalisi izimoto counterbalanced kumele kuhambisane .. .Funda kabanzi »
Izinzuzo ugibele hoverboard
isikhathi Iposi: 12-26-2016
Hoverboards athandwa kakhulu namuhla futhi kube mkhuba izingane, intsha kanye aults ukuthatha uhambo iDemo ne amangalisayo self ibhalansi hoverboard.If ufuna ukuthenga izandla hoverboard khulula izingane, abangane noma ngokwakho, ungathola informations abaningi kusukela internet ngokuphathelene isondo 2 ...Funda kabanzi »
Kungani i-scooter kagesi noma skateboard ngakho wamukela emakethe?
isikhathi Iposi: 12-14-2016
Faka onyakeni omusha, lo kagesi ibhalansi isikuta ensimini mncintiswano ziba abanolaka. abakhiqizi ezinkulu ekusungulwe imikhiqizo yabo entsha, qhubeka yokuqinisa ukwandisa ithonya lawo futhi isimo umthengi. Umbhali njalo kubhekwe ukuthi omunye co ebaluleke kakhulu ...Funda kabanzi »
Kungani isikuta ibhalansi elimhlophe-collar yomsebenzi mshini?
isikhathi Iposi: 11-22-2016
Uma uya emsebenzini, yini ukwesaba kakhulu? Ngikholwa iningi labantu bethi ngasekupheleni, ngaphandle uma sithonywa ngesihluku esiyinqaba besendleleni eya emsebenzini. Abantu abaningi baye emsebenzini ngebhasi ongaphansi komhlaba Ukugibela Yiqiniso, ungakhetha uzihambele. Futhi phakathi bobathathu babe disadv yabo ...Funda kabanzi »
Ingabe uyazi ukuthi lezi amathiphu alusizo ngokulingene isikuta silondoloze?
isikhathi Iposi: 11-03-2016
Bangaki Wazi for kulinganisa isikuta silondoloze amathiphu? Namuhla ake Koowheel Umhleli ukwethula ngawe. Indlela sesondlo Ukulinganisela Scooter noma hoverboard: 1. Ukusetshenziswa Koowheel isikuta ngokulingene ayikwazi ehlukanisiwe indima isondo, ngakho kufanele wenze inspecti efanele ...Funda kabanzi »